नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या २ हजार ६ सय ३४ पुग्यो । | नेपालगन्ज टाइम्स
काठमाडौं – कोभिड १९ को सङ्ख्या नेपालमा २ हजार ६ सय ३४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा ३३४ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पछिल्लो २४ घण्टामा ३३४ जनामा कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिए । जसमध्ये ३१९ पुरुष र १५ जना महिला रहेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाकाअनुसार नयाँ संक्रमित हुनेहरुमा मोरङमा २५, पर्सामा १, झापामा ५, ताप्लेजुङमा १, सप्तरीमा १३, बारामा १२, सिन्धुलीमा १, रौतहटमा ६५, म्याग्दीमा १, बाग्लुङमा १०, पर्वतमा ४, स्याङ्जामा १, डोटीमा ३, बाँकेमा ४२, कपिलवस्तुमा २९, दाङमा १५, मुगुमा १, दैलेख ११३, खोटाङमा ३, धनुषामा ६, महोत्तरीमा ३ र सर्लाहीमा ३ जना रहेका छन् ।
योसँगै मुलुकभर संक्रमितको संख्या दुई हजार ६ सय ३४ जना रहेका उनले जानकारी दिए । जसमा २४५० जना पुरुष र १८४ जना महिला रहेका छन् ।
हालसम्म ६५ जिल्लामा कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिएको जानकारी दिएका प्रवक्ता डा. देवकोटाले दुई सय ९० जना निको भएर घर फर्किएको जानकारी दिए । साथै यही जेठ २० गते पाँच दिन अघि भारतबाट आएका एक ४५ वर्षीय पुरुषको निधन भएको र योसँग निधन हुनेको संख्या १० पुगेको उनले जानकारी दिए ।